SAM ကို-ဗြိတိန် - ဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေး Panel ကို Install လုပ်နည်း
သင်ဒီမှာပါ: နေအိမ် » installation » ဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေး Panel ကို Install လုပ်နည်း
post ကိုနက်ရှိုင်းခြင်းနှင့်အပေါက်ချင်းဒေသခံရာသီဥတုနှင့်မြေဆီလွှာအခြေအနေများကဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်း, terminal ကိုရေးသားချက်များနှင့်လိုင်းရေးသားချက်များအဘို့အပေါက်တွေကိုပုံမှန်အားဖြင့် 10 "အချင်းနဲ့ 30" slope နှစ်ဖက် (Fig.2) နဲ့နက်ရှိုင်းတူးနေကြပါတယ်။ Post ကိုပေါက်တွေမိဖြစ်သင့်သည်။ 10 & quote; စံ4& quote ဘို့အချင်း; x က4& quote; ပို့စ်များကို 12 & quote;5& ​​quote ဘို့အချင်း; x က5& quote; ပို့စ်များကို။ တစ်မိဖို့ကွန်ကရစ်အတွက်ပို့စ်များကိုသတ်မှတ်မည်။ 24 & quote ၏အတိမ်အနက်ကို ;.
တွင်းထဲမှာ post ကိုနေရာချ။ အဆိုပါတိုင်တွင်း၌ဗဟိုပြုရပါမည်နှင့်သံလမ်းတိုင်သို့ဖြည့်စွက်ကြသောအခါထိုသူတို့ string ကိုလိုင်း Parallel ပါလိမ့်မယ်ဒါကြောင့်ခြံစည်းရိုးလိုင်းနှင့်အတူစတုရန်းဖြစ်ရပါမည်။ လက်သမားတစ်ဦးရဲ့အဆင့်နှစ်ခုကပ်လျက်နှစ်ဖက်ပေါ်တွင် post ကို Check ကြောင့်မှန်ထုပ်ဖြစ်ပါတယ်သေချာစေရန်အဖြစ်လိုအပ်သောညှိ။ တန်းအထက်ခြံစည်းရိုးအမြင့်အဖြစ်ကောင်းစွာဤအချိန်တွင်ဆုံးဖြတ်သည်။ ကျနော်တို့မြေပေါ်မှာအောက်ခြေရထားလမ်း၏အောက်ခြေကနေထွက်ခွာရမည် "2 အကြံပြုပါသည်။
4. setting ကို LINE စာတိုက်နှင့်ရထားလမ်း
post ကိုအကွာစင်တာအပေါ် 8 '' ထက်လျော့နည်းသည်ဆိုပါက, အလိုရှိသောအရှည်အောင်မြင်ရန်ထိပ်ပိုင်းနှင့်အောက်ခြေသံလမ်း၏အဆုံးကနေအပိုင်းအစခုတ်ဖြတ်။
ထိပ်နဲ့အောက်ဆုံးသံလမ်းရဲ့အရှည်တိုင်၏ဗဟို-to-စင်တာတိုင်းတာခြင်းထက် 1/2 "ဒီထက်ဖြစ်သင့်သည်။
Terminal ကိုပို့စ်မှာစတင်ကာအောက်ခြေရထားလမ်း (Fig.5) သို့သတ္တုထည့်သွင်းလျှော။
အဆိုပါရထားလမ်းကွန်ကရစ်နှငျ့ပွညျ့စုံပါလိမ့်မည်တဲ့ post ကိုသို့သွားလျှင် ( ', အပိုင်း6ကိုရည်ညွှန်းRE-BAR & amp နဲ့အတူ POST ဖြည့်ဆည်း; ကွန်ကရစ်'), () ကသို့ Fig.6 စီးကနေကွန်ကရစ်ကာကွယ်တားဆီးဖို့ပြွန်တိပ်နှင့်အတူရထားလမ်း၏အဆုံးတံဆိပ်ခတ်ထားလော့။
ပို့စ် (Fig.7) တွင်အောက်ခြေအပေါက်ထဲသို့ရထားလမ်းတွန်း။ ခြံစည်းရိုးလိုင်းဆင်းကိုဆက်လက်မလုပ်ဆောင်, လာမယ့်အပေါက်သို့လာမည့် post ကိုနေရာချခြင်းနှင့်စာတိုက်သို့အောက်ခြေရထားလမ်းထည့်ပါ။
ကွန်ကရစ်အတူ post ကိုအပေါက်ဖြည့်ပါ။
ပို့စ်မှန်ကန်သောအမြင့်မှာသတ်မှတ်ထားကြောင်းသေချာစေရန်စစ်ဆေး, မှန်ထုပ်များနှင့်အဆင့်နှင့်ခြံစည်းရိုးလိုင်းမှစတုရန်းဖြစ်ပါတယ်။ installation ကိုဆက်လက်အဖြစ်တည်ငြိမ်တိုင်စောင့်ရှောက်ရန်အဖြစ်လိုအပ်သော block နှင့်ထောက်ခံမှု။
အားလုံးပို့စ်များကို install လုပ်ပြီးအောက်ဆုံးသံလမ်းနှင့် INSERT နှင့်အတူသတ်မှတ်ထားကြသည်သည်အထိဤအခြေလှမ်းများကိုပြန်လုပ်ပါ။
5. T က & amp Installing;, G ဘုတ်အဖွဲ့
ရေးစင်တာနဲ့ပို့စ်တစ်ခုခြင်းစီအပေါ်လမျးကွောငျးတွင်းအကြားဦး-Channels တ install လုပ်ပါသို့မဟုတ် T က & amp ၏နှစ်ဖက်၏အလယ်ဗဟိုမှဦး-Channels တ install;, G ဘုတ်အဖွဲ့။
အောက်ခြေရထား: post ကို၏အောကျခွတွင်းသို့ရထားလမ်း, groove ဘက်တက် Install လုပ်ပါ။
သီးသန့်လုံခြုံရေးပြား: left မှလက်ျာဘက်ကနေအောက်ခြေရထားလမ်းပေါ်ရာအရပ်သို့လျှောပြား။ အတူတူတစ်ဦးချင်းစီ panel ကိုသော့ခတ်၏လျှာကိုနှင့် groove အာမခံပါသည်။
ထိပ်တန်းရထားလမ်း: တစ်ထောင့်မှာပါနှင့်ကပ်လျက်ပို့စ်သို့နောက်ဆုံး panel ကိုကျော်လျှော, post ကိုထိပ်အပေါက်သို့ရထားလမ်း, groove ဘက်ချ Install လုပ်ပါ။ အဖြစ်ဝေးတတ်နိုင်သမျှပထမဦးဆုံးပို့စ်ထဲသို့ပြားများနှင့်ဆလိုက်သံလမ်းပေါ်သို့ဆင်းနိမ့်ရထားလမ်း။ ဒုတိယ post ကိုသို့ရထားလမ်းလျှောချရထားလမ်းတွန်းအားပေးရန် Continue ။
ရာဇမတ်ကွက်ရုပ်သံလိုင်း: အလယ်မှာရထားလမ်း၏ထိပ်၏ဗဟိုပေါ်သို့ရာဇမတ်ကွက်ရုပ်သံလိုင်းများထဲမှအပိုင်းအစ install ပေးမိမိကိုယ်ကိုနှိပ် screw နှစ်ခု3ကိုသုံးနိုင်သည်။ ဒါ့အပြင်ထိပ်ရထားလမ်း၏နားလည်အပေါ်ထည့်သွင်းပါ။
နှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ရထား: အထက်တွင်သီးသန့်လုံခြုံရေးထိပ်တန်းရထားလမ်းနှုန်းအဖြစ် Install လုပ်ပါ။
ရာဇမတ်ကွက်: အနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်ရထားလမ်း၏အထက်ပိုင်းရုပ်သံလိုင်းသို့ရာဇမတ်ကွက်လျှော့ချစဉ်နှင့်အမျှဝေးတတ်နိုင်သမျှ, slotted post ကိုသို့ရာဇမတ်ကွက်များထဲမှအဆုံးထည့်သွင်း။ ဒါကြောင့်နှစ်ဦးစလုံး၏ရေးသားချက်များသို့ slotted ဖြစ်နေဆဲသေချာအောင်ရေးသားချက်များအကြားရာဇမတ်ကွက်အဓိကထား။
ထိပ်တန်းရထား: ရာဇမတ်ကွက်အပြည့်အဝရုပ်သံလိုင်းများတွင်ပါဝင်နေသည်သေချာ, ကိုယ်ရေးနှုန်းအဖြစ် Install လုပ်ပါ။
6. GATE Post အားဖြည့်
7. The post Caps attachment
8. ကို clean up
install လုပ်ပါဗီနိုင်း privacy ကို panel က privacy ကို panel ကို installation ကိုညွှန်ကြားချက် privacy ကို panel ကိုတပ်ဆင်ရန်ညွှန်ကြားချက် privacy ကို panel ကိုတပ်ဆင် ဗီနိုင်းသီးသန့်လုံခြုံရေး Panel ကို